Kobo Aura One သုံးသပ်ချက်များ။ အင်္ဂါရပ်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အကျိုးကျေးဇူးများ | eReaders အားလုံး
Kobo Aura တစ်ခုသုံးသပ်ချက်
Nacho Morato | | စာဖတ်သူများ
ဤ Kobo Aura တစ်ခုသုံးသပ်ချက် ဒါဟာငါသည်လည်းငါကြိုးစားခဲ့ပထမ ဦး ဆုံး Kobo ဖြစ်ပါတယ်။ ငါမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့မျှော်လင့်နေတဲ့အတွက်ငါစိတ်ပူမိတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တစ်ခုခုကနေအများကြီးမျှော်လင့်မိတဲ့အခါမင်းဟာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါစိတ်ပျက်စရာမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်။
ငါလပေါင်းများစွာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စာဖတ်သူကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါငါကယ့်ကိုခံစားကြပါပြီ။ အဖြစ်မကြာမီသင်ကလက်ခံရရှိအဖြစ် ငါ့ကိုအထင်ကြီးစေခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအရာကတော့သူ့ရဲ့အရွယ်အစားပဲ။ ကြီးမားသည် အရမ်းကြီးလို့ပြောလိမ့်မယ် ဖတ်ရှုသူအကြီးများကိုသင်ရှာဖွေနေသူများသည်ယင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ သူများသည် 7,8″ ရှည်လျားသောလမ်းသွားပါ။ အထူးသဖြင့်သင်6used အသုံးပြုသောအခါ
ငါနောက်ဆုံးတော့ကြိုးစားပါ Kindle ကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်ရှိအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူသွားကြကုန်အံ့, ပြီးတော့ငါအများကြီးသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ သင်ဝယ်ချင်လျှင်ကြည့်ပါ ဒီမှာ
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအဆုံးတွင် Kobo Aura One ၏ဓာတ်ပုံပြခန်းတစ်ခုရှိသည်
8 Kobo Aura တစ်ခုပြခန်းတစ်ခု
7,8 screen ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
အီးမှင်စာ HD ကို။
ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု: ၆၀၀ x ၈၀၀ ပစ်ဇယ် (H x V) / 872 dpi
အလင်းအိမ်။ ComfortLight Pro စနစ်
163 116 8 မီလီမီတာ
Wi-Fi 802,11b/ g / n နှင့် micro-USB
MicroUSB ဆိပ်ကမ်းကို powered
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်:4ပတ်အထိ
60 မီတာအနက် IP2X တွင်ရေခံနိုင်သည့်မိနစ် ၆၀
စာအုပ်များကို Adobe DRM မှကာကွယ်ထားသောအကြောင်းအရာများဖြင့်ထောက်ပံ့သည်
ဒါဟာဘေးထွက်ဖွင့်လှစ်အတူ Semi- တင်းကျပ် box ထဲမှာရောက်ရှိ။ ၎င်းသည်စာအုပ်များစုဆောင်းထားသောသေတ္တာများကဲ့သို့အနေဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်သည်။ အလွန်အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်။
ငါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်လျှောက်လုံးမီးမောင်းထိုးပြသည့်အတိုင်း, ဒါဟာကြီးမားတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, သူတို့က 7,8 လက်မဖြစ်ကြပြီးတစ်လက်နှင့်ကိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။ စာမျက်နှာလှည့်ခြင်းအတွက်ဘေးထွက် panel မရှိပါ။ အရာအားလုံးသည်ထိတွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော် configuration ထဲတွင် menus များနှင့် page လှည့်များကို activate လုပ်ရန်ကွဲပြားသောဒေသများကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောခလုတ်သည်နောက်ဘက်ရှိပါဝါခလုတ်ဖြစ်သည်။
ငါကြီးတယ်လို့ပြောရင်ငါကြီးတယ်။ ဒီနေရာတွင် ၇″ Kindle Oasis အသစ်နှင့်အတူဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွေ့နိုင်သည်။ ဤတွင် Kobo နှင့် Amazon Kindle တို့၏သရဖူများကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်
နောက်ထပ်နှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခုမှာ ၆″ Kobo Clara အသစ်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအရွယ်အစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ လွယ်ကူလိမ့်မည်။
မျက်နှာပြင်ကြီးသည်ဖြစ်သော်လည်းအလင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အပြာရောင်အလင်းကိုလျှော့ချရန် ComofortLight Pro နှင့်အတူလာသည်
Boyue Likebook အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Brightness နှင့်သဘာဝအလင်းကိုအလိုအလျောက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ တောက်ပမှုအတွက် ambient light sensor အသုံးပြုပါ။ သဘာဝအလင်းဖြင့်အလင်းရောင်၏အရောင်ကိုညဘက်တွင်လိမ္မော်ရောင်မှသည်နေ့အချိန်၌အလွန်ကြည်လင်သောအဖြူရောင်နေရောင်ခြည်အထိသတ်မှတ်ပေးသည်။
မီနူးများကို ဖြတ်၍ ရွေ့လျားရန်နှင့်ဖတ်ရှုသူ၏ကွဲပြားသောလက္ခဏာများကိုပြောင်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ Kobo ကိုဘယ်တော့မှမထိခဲ့ဖူးဘူးဆိုရင်တောင်သင်ဟာအဲ့ဒီချက်ချင်းအကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးခိုင်မာပြီးတည်ငြိမ်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပါတယ်။
ငါအိတ်ဆောင်ပေါင်းစည်းမှုကိုချစ်။ ၀ က်ဘ်ပေါ်၌တွေ့ရသောမည်သည့်ဆောင်းပါးမဆိုသင် Pocket သို့ဖတ်လိုသည့်အခါနှင့်ထပ်တူပြုသည့်အခါသင့်စာဖတ်သူတွင်ထိုအရာများရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အိတ်ဆောင်ထဲသို့ထည့်ခြင်းသည် browser ပေါ်ရှိခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်မျှဝေခြင်းနှင့်ဤဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ Pocket သည် tag များသောအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်သင်အမြဲတမ်းဖတ်ချင်သောအရာများမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရင်းအမြစ်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဗွီဒီယိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းလေ့ရှိသည် အရာအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းတွင်မည်သည့်အချက်မျှမတွေ့ပါ။ တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန် tags များကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ငါကနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရှာဖွေနေပေမယ့်ဒီ option ကိုရှာမတွေ့ပါ။
၎င်းကိုမည်သို့ပေါင်းကူးရမည်ကိုစဉ်းစားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်အိတ်ဆောင်အကောင့်နှစ်ခုရှိသည့်သာဓကနှင့်အလယ်တန်းရှိရန်သာစဉ်းစားနိုင်သည်။ သင်ကအရာအားလုံးကိုမူလတန်းသုံးသည်။ သငျသညျ Kobo နှင့်အတူထပ်တူပြုရန်သောတဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်“ botch” ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အရာရာကိုထပ်တူကျအောင်ပြုလုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသည့်အချိန်၌၎င်းကိုသင်ခန်းစာတွင်ရှင်းပြမည်ဟုကတိပေးသည်။ အားနည်းချက်များသည်အားသာချက်များထက်များစွာလျော့နည်းသည်။
ငါမပြီးနိုင်ဘူး ရေခုခံစမ်းသပ်ခြင်းမရှိဘဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ၎င်းသည်ဗွီဒီယိုနှင့် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်းပြproblemsနာမရှိဘဲသွားကြစို့။ ငါကမိနစ်အနည်းငယ်နစ်မြုပ်ခဲ့ကြပြီးအရာအားလုံးperfectlyုံအလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
တွေ့ဆုံသည် IP8X သတ်မှတ်ချက် ဆိုလိုသည်မှာအနက်သည် ၂ မီတာအထိရှိသည်။ မိနစ် ၆၀ ဖြစ်သည်။
ငါကစူပါ ereader ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံကအရမ်းကောင်းတယ်။ startup၊ စာမျက်နှာလှည့်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ မှတ်စုများနှင့်ရေးသားခြင်းစသည်တို့တွင်ပါကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ အလင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအသုံး ၀ င်မှုအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သင်အနည်းငယ်ထိလျှင်မြန်မြန် Kobo menus များနှင့်သင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။
ငါပြောခဲ့သလိုတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ရှိပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင်အိတ်ဆောင်ပေါင်းစည်းမှုကိုနှစ်သက်သည် Kobo တွင်ကိုယ်ပိုင် ebook များရောင်းချရန်စတိုးဆိုင်ရှိသည်ဖြစ်သော်လည်း Amazon ၏ Kindle နှင့်၎င်း၏ကက်တလောက်နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကဲ့သို့အစွမ်းထက်သည်။
ဘက်ထရီအဆင့်မှာ၊ ပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ရက်သတ္တပတ်များစွာကျွန်ုပ်တို့စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ကျွန်တော်သတိရဖို့လိုတာကတစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းကကြီးမားတဲ့ကိရိယာတစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်နေ့စဉ်၎င်းကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်အိပ်ရာခင်းခြင်းတွင်ဖတ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာကတစ်ခုချင်းစီရဲ့အရသာပေါ်မူတည်တယ်။
Kobo Aura တစ်ခုပြခန်းတစ်ခု
ပြခန်းရှိဓာတ်ပုံအားလုံးကို Sagunto ရှိ Roman ပြဇာတ်ရုံတွင်ရိုက်ထားပြီးအဖုံးတွင်ပါ ၀ င်သည် ရက်ကန်း ယခုအသုံးမဝင်တော့သည့် Fata Libelli ထုတ်ဝေရေးတည်းဖြတ်သူ Nina Allan မှ။ ၎င်းသည် Arachne ဒဏ္myာရီ၏ခေတ်သစ်လိုက်လျောညီထွေမှုဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်စွာခံစားပါ!
သုံးသပ်ချက် - Nacho Morato
သင် ereaders ကြီးများကိုမကြိုက်ပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်မဟုတ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » Kobo Aura တစ်ခုသုံးသပ်ချက်
သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကို Nacho အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ၌တစ်လအသစ် Kindle အိုအေစစ်ခဲ့ကြောင့်အံ့သြဖွယ်သလိုပဲ။ အံ့သြစရာကောင်းတာက ၆ လက်မနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အပိုလက်မအရွယ်ပြပွဲဟာဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းလဲ၊ ဒီတစ်ခုကပိုကြီးတယ်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျနှင့် Kobo မကြိုးစားဘဲကျွန်ုပ် Oasis ကိုရွေးလိုက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လဲလျောင်းနေသောစာဖတ်ခြင်းနှင့် Kindle ၏သဟဇာတဖြစ်မှုသည်၎င်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ နူးညံ့သောအရောင်များဖြင့်အလင်းပြtheနာသည်အမေဇုန်ကကူးယူရန်အချိန်ယူနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဟုထင်ရသည်။
- သိုလှောင်မှုစနစ်သည် Kindle နှင့်တူသလော။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည် "collection များ" ပေါ်တွင်အခြေပြုထားသလားသို့မဟုတ် pc မှဖိုင်များကို usb memory ကဲ့သို့တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သလား။
အဘိဓာန်ကောဘယ်လိုလဲ။ သငျသညျပြီးသားတ ဦး တည်းရှိပါသလား English Spanish?
Amazon တွင် ၀ ယ်ထားသောစာအုပ်များသို့မဟုတ် Kindle Unlimited သို့မဟုတ်မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သော Kindle Prime ကိုသုံးရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ငါမသိဘူး၊ အနည်းဆုံးတော့မလွယ်ဘူး၊
Nacho Morato ဟုသူကပြောသည်
- ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စာအုပ်၌စုစည်းရန်စုဆောင်းမှုများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အဲဒါကိုသူတို့ရဲ့ menus များမှပြုလုပ်သည်။ သင် folder များသို့မဟုတ်ဖိုင်များကို PC မှ ereder သို့တိုက်ရိုက် upload လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စာအုပ်များကိုမှတ်သားသည်။ အဆင့်ဆင့်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ သင်ဖိုင်တွဲ ၂ ခုကိုစာအုပ် ၄ ခုစီထားမည်ဆိုပါကသင်စာအုပ် ၈ လုံးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ collection များကို menu မှသူတို့ကိုလုပ်ဖို့။
- အဘိဓာန်များနှင့်ဘာသာပြန်ဆိုသူယူဆောင်လာပါ။ ကျွန်ုပ်စပိန်၊ အင်္ဂလိပ်နှင့်စပိန် - အင်္ဂလိပ်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပြီး configuration menu မှဘာသာစကားများစွာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
- ဟုတ်တယ်၊ Amazon ကနေစာအုပ်တွေထည့်လို့ရတယ်၊ download လုပ်တယ်။ သူတို့က .azw3 ပဲ။ သူတို့က caliber ဆီကို upload လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကို kobo ဆီပြောင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကို .epub ကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းပေးတယ်။ သင်ကတစ် ဦး kindle ထဲမှာထားချင်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ azw3 ကသူတို့ကိုတိုက်ရိုက်မဖတ်ပါဘူး။ Kindle ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့အကန့်အသတ်မရှိ၊ ချုပ်ကိုင်ထားတာကိုငါမကြည့်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်၊ သူတို့ကသင့်ကိုစာအုပ်တွေကူးယူခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သင်အတူတူလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမသိဘူး
အမှန်တရားကတော့ Kindle နှင့် Amazon တို့၏အတွေးအမြင်ကိုကျွန်ုပ်၏စက်ကိရိယာများအား USB ချောင်းများနှင့်ဖိုင်တွဲများမှတစ်ဆင့် pc မှဆွဲယူ။ မရပါကမည်သည့်အခါမျှနားမလည်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Papyre 5.1 အဟောင်းကိုဤသို့ပြုခဲ့ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနှင့်အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်သေချာတာပေါ့ ... ဒါပေမယ့်ငါမသိဘူး။
ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ မေးခွန်းတစ်ခုမှာ - Kobo တွင် ebooks များရောင်းရန်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရှိသည်ဖြစ်သော်လည်း Amazon ၏ Kindle နှင့်၎င်း၏ကက်တလောက်နှင့်ပေါင်းစည်းထားခြင်းလောက်မစွမ်းနိုင်ပါ။
ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ ? ငါမမှားရင် Kobo မှာစာအုပ် ၆ သန်းကျော်ရှိပြီး Amazon ကဘယ်တော့မှထပ်မကြေညာသေးဘူး။ အမှန်တရားလား
စကားမစပ်ပြောရရင်တော့ Oasis နဲ့မနှိုင်းယှဉ်ရင်စျေးကြီးလွန်းတဲ့အကြောင်းပြောတာကပိုပြီးစျေးကြီးတယ်၊ ငါကစီးပွားဖြစ်မဟုတ်ထို့ကြောင့်အလွန်ရည်မှန်းချက်မဟုတ်ပါဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲအရာရာတိုင်းဟာစာအုပ်အရေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ "ဂေဟစနစ်" နှင့် ပတ်သက်၍ အမေဇုန်သည်ပိုမိုစွမ်းအားကြီးမားသည်။ လူအများကကမ်းလှမ်းမှုများ၊ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသောစာအုပ်များစသဖြင့်များပြားသောကြောင့်ထိန်လင်းရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ သူတို့တွင် Kindle Unlimited၊ စာအုပ်ဖတ်ရန်နှုန်းထားများရှိပြီးမကြာသေးမီကဖွင့်လှစ်ထားသော Kindle Prime သည် အကယ်၍ သင်သည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်လျှင်အခမဲ့စာအုပ်များကိုငှားရမ်းနိုင်သည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်မည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်မျှထိုအရာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။
သို့သော်ငြားလည်း။ ငါစျေးကြီးတဲ့ ereader အကြောင်းပြောနေတာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ereader အတွက်ယူရို ၂၂၉ ကဘယ်ကုမ္ပဏီနဲ့မှနှိုင်းယှဉ်စရာမလိုဘဲငွေအများကြီးပါပဲ။ Kobo တွင်အခြားစျေးနှုန်းချိုသာသောစာဖတ်သူများသည်ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သော Kobo Clara HD ကဲ့သို့သောစျေးနှုန်းချိုသာသည်။ ငါ Oasis ၏စျေးနှုန်းအကြောင်းမပြောလျှင်၎င်းသည် Aura One ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း Kindle Oasis အသစ်နှင့်အဟောင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသင်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကမြင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီပြီးသားတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့်။
အိုး၊ ဒီဟာတွေဟာစီးပွားဖြစ်ပို့စ်များမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းတို့သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကမိမိတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစွန့်ခွာ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်ရန်။ ပြီးတော့ငါတို့လုပ်နေတာလေ။ ဒါဟာပုဂ္ဂလဒိis္ကြောင်းကိုရှင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းမွန်သော eReader၊ ၎င်းတွင်ရှိရန်လပေါင်းများစွာ (စာအုပ် ၇ အုပ်ကျော်ဖတ်သည်) အလွန်ကောင်းသည်။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပြောတာအားလုံးမှန်ပါတယ်။
မက၎င်း၏ 232gr သောဖြစ်ပါတယ်။ (ငါ့အလေးချိန်က) အလွန်ကြီးစွာသောအရာဖြစ်ကြ၏။
ငါတစ်ယောက်တည်း (သို့မဟုတ်ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့်) စားသည့်အခါစာဖတ်လိုသည်။ ၎င်းသည်အိမ်မှထွက်ခွာရန်ကျွန်ုပ်၏ "အားကောင်းသော" ကိရိယာဖြစ်သောကြောင့်ငါ "origami" အမျိုးအစားတစ်ခုမှထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုပေးသည့်အပြင်၊ ဟုတ်တယ်, 116gr ထည့်ပါ။ အပိုအလေးချိန်
ဂေဟစနစ်အတွက် ... ကြောင်း, အများကိန်းအတွက်; ရွေးချယ်စရာတွေရှိတာကောင်းပါတယ်
သတိပြုရမည့်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာ - ၆″ ဖန်သားပြင်များကိုသင်စွန့်ခွာသောအခါ၎င်းတို့ထံသို့ပြန်ရန်ခက်ခဲသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Kobo Aura One တစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်စာအုပ်များမည်သို့တင်ပို့သည်ကိုကျွန်ုပ်မရှင်းလင်းသောကြောင့် (ကျွန်ုပ်၌ယခင်က papyre ရှိခဲ့သည်) သူတို့ကိုတိုက်ရိုက် upload လုပ်ခဲ့သည်။ .but စာအုပ်ရွေးရန်မျက်နှာဖုံးများကိုတွေ့ချင်သောအခါဘာဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သုံးစာမျက်နှာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ပိတ်ဆို့ခံရပါသည်။ ငါ Calibre နှင့်အတူစာအုပ်တွေအပ်လုဒ်တင်အကြောင်းကိုဖတ်ပြီးပါပြီ။ ငါဘယ်လိုလုပ်သင့်သည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြနိုင်ပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!
Caliber ကိုသင် install လုပ်သည်။https://calibre-ebook.com/)
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် "Preferences> Run Welcome wizard" တွင်သင်ဖွင့်သောအခါ Kobo Aura ကိုသင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
Caliber အပြေးနှင့်စာအုပ် (များ) နှင့်သင်နှင့်အတူ Kobo (အားသွင်း၊ ဖွင့်၊ အိမ်မျက်နှာပြင်တွင်) ကို USB မှတဆင့် PC နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
Kobo သည်ကွန်ပျူတာကိုရှာတွေ့ပြီဟုပြောသင့်သည်။ ချိတ်ဆက်ပါကချိတ်ဆက်မိပြီးအားသွင်းရလိမ့်မည်။
PC တွင် Kobo ၏ root folder ကိုဖွင့်သင့်ပြီး Caliber တွင် "On device" နှင့် "Send to device" နှင့် "Device" ခလုတ်များထည့်ပါ။
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရွေးပါ၊ “ ကိရိယာသို့ပို့ပါ” အိုင်ကွန်ကို နှိပ်၍ သင်လိုချင်သည့်စာအုပ်များကိုပြန်လုပ်ပါ
"Device" ပုံသင်္ကေတကိုသင်နှိပ်လိုက်ပါကသင်လွှဲပြောင်းထားသောစာအုပ်များပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ထိုအိုင်ကွန်၏ညာဘက်တွင်ကပ်နေသောမြှားအနည်းငယ်ရှိသည်။ ၎င်းကိုနှိပ်သောအခါ“ ဤစက်ကိုအဆက်ဖြတ်ရန်” option ကိုပေးသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နှိပ်ပါ။
Kobo သည်ပင်မမျက်နှာသို့ချက်ချင်းပြန်သွားပြီး USB ကိုဖြုတ်ပါ။
စာဖတ်သူကို (စာအုပ်တစ်အုပ်လျှင်အများဆုံး2မိနစ်), တစ် ဦး တည်းထားခဲ့ပြီးသူ့ကိုလုပ်ခွင့်ပြုရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။
သတိထားပါ၊ ပြappearနာဆက်ရှိနေသေးလျှင်စာအုပ်ကောင်းကောင်းမထင်ရသည့်အဖုံးများသည်စာအုပ်များ၏စီစဉ်ထားမှုညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် https://www.epublibre.org/ ePub ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ စစ်ဆေးပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီမှာ Caliber အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောကြပါတယ် https://www.todoereaders.com/calibre-portable.html
မင်္ဂလာပါ Nacho၊ ခင်ဗျားရဲ့ဆောင်းပါးကကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် PDF ကိုအဆင်ပြေစွာဖတ်နိုင်တဲ့ ereader တစ်ယောက်ရှာနေတာပါ။ ငါမင်းကိုမေးလား၊ Aura One က PDF နဲ့ဖတ်လို့ရလား။ မဟုတ်ပါကမည်သည့် ereader ကို PDF တွင်ဖတ်ရန်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပုံရသည်။ ပြီးသားမှစ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အိုမာ
Omar El Kadri သို့ပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါအိုမာ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် pdf ကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်သောစာဖတ်သူကိုစမ်းသပ်။ မရပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ဖတ်လို့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်စာရွက်စာတမ်းကမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနဲ့မကိုက်ညီတာကြောင့်သင်အမြဲတမ်းထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေရတော့မယ်၊ Aura One တွင်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား၏အားသာချက်များရှိသော်လည်း pdf ဖတ်ရန်၎င်းကို android နှင့်ကြည့်ရှုသူအမျိုးမျိုးနှင့်ဖတ်ရှုသူတို့တွင်အတွေ့အကြုံကောင်းရရန်ကျွန်ုပ်မအကြံပြုလိုပါ။
စာအုပ်တွေမဟုတ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ စာရွက်တွေနဲ့အခြား pdf တွေအတွက်တော့ငါတက်ဘလက်ကိုသုံးတယ်။ စာအုပ်တွေဒါမှမဟုတ်ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံ၊ epub၊ mobi စသည်တို့၊ ဒီဂျစ်တယ်ပုံစံကိုသွားတယ်။
Kobo Clara HD ကို eReader အဖြစ်ဇွန် ၅ ရက်တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်